Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsna Soomaaliya oo cambaareeyey dilka loo geeystay xildhibaan Soomaaliyeed |
Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsna Soomaaliya oo cambaareeyey dilka loo geeystay xildhibaan Soomaaliyeed
Ergayga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya (SRSG), Nikolaas Kay ayaa cambaareeyey dilka loo geeystay Isaaq Maxamed Riino oo ahaa xubin ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed. Dilka mudanaha kadib ayeey Dowladda Federaalka Soomaaliyeed ku baaqday in si buuxda loo baaro arrinta, dambiilayaashane la hor keeno cadaaladda.
Marxuum Riino saakay ayaa lugu dilay Muqdisho kadib markii ay qarxeen waxyaalaha qarxo oo gaarigiis lugu xiray. Xubin kale oo Baarlamaanka ka tirsan oo la yiraahdo Maxamed Cali iyo dad kale oo rayyid ah ayaa ku dhaawacmay isla weerarkaas.
“Waxaan si xoog leh u cambaareeynayaa dilkaan. Waa in si buuxda loo baaraa falkaan argagixisnimada leh, dambiilayaashane si dhakhso ah loo hor keeno cadaaladda” ayuu yiri Ergayga Gaarka ah.
SRSG Kay ayaa u diray tacsi tiiraanyo leh qooyskii iyo saaxiibadii uu ka geeryooday Riino iyo sidoo kale Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeedba wuxuuna u rajeeyey mudanihii la dhaawacay Maxamed Cali iyo dadkii kale ee rayyidka ahaa in si dhakhso ah u biskoodaan.